Qanafaa – Oromia Tiyya
Qanafaan meeshaa aada Oromoo keessahu gosa Arsii keessatti dubartiin erga deessee (deette) booda adda (kallacha)irratti meeshaa hidhattu. Qanafaan callee, muka fi simaagoo irraa hojjatama. Qanafaan asxaa dubartiin dahuu agarsiisuu yoo ta’u, hawaasa keessatti kabaja guddatu kennamaf. Dubartiin aadaa Oromoo keessa kabaja gudda qabdi, keessahu tan dhiheenya deesse ammoo kabaja ol’aanaa qabdi. Akka aadaa Arsiitti Wayyuu jedhamti.
Dubartiin Qanafa addarra qabdu hanga harma hoosisuu dhaabdutti Abba Worraa ishee waliin wal-qunnamtii saalas hin gootu. Sababni isaas osoo harma hin guusin yoo wal-qunnamtee daa’imni humna hin qabatu jedhamee waan yaadamuuf. Akkasumas daa’imni dhibee adda addaatiif ni saaxilama jedhamee waan herregamuuf hanga harma guusitutti qunnamtii saalaatirra of qusatu. Tarii Abba Worraa ishee akka wal-qunnamtii isa waliin gootu yoo dirqisiise, dubartiin sun manguddootti himatti. Tuuta Siinqeettitis ni himatti. Gochi akkas Fafa jedha.
Fafa jechuun waan salphina hawaasa tokko keessatti uumamu jechudha. Fafa hawaasni hundi ni balaaleffata. Kana balaaleffachuufis dubartootni gareedhaan Siinqee isaan qabatanii bahanii Fafa akkas balaaleffatu. Balaleeffanna isaanis Manguddoon walitti bahan dhagahuuf; dhugaas galchuuf. Dubartii deessu sanaas dhugaa galchaniif. Toota Siinqees kabajaan Korma qalaniif mana isaanitti akka deebi’an taasisa.
Qanafaa Arsii keessatti faaydaa biratis ni qaba. Akka qusanna maatiitti ni fayyada (family planning method). Daa’imni tokko osoo harma hin gu’in wagga lama ykn sadihis turuu ni danda’a,kun ammoo dubartoota akka addaan fageessa dahaniif isaan gargaara.
Ammaaf waa’ee Qanafaa assi irratti dhaaba. Barreeffama itti aanuu keessatti Wayyuu fi Siinqee maalii akka ta’an qabadhee isinii dhihadha. Hangsituu turtii gaarii hawwaa, yaada yoo qabaattan na qunnamurra harka hin saamsatna.
One thought on “Qanafaa”
Qanafaa- Kabaja Deessuu Haaraa, Meeshaa Qusannoo Maatii